Meteorology - Mgbasa ozi gbasara igwe | Ihu Igwe Weebụ (Peeji nke 5)
Anyị na-egosi gị GIF nke na - eme ka ị mata ezigbo egwu nke okpomoku ụwa. Ọ dị nnọọ mfe, ma ọ na-enye ozi siri ike. Bata ma chọpụta.
Ga-achọ ịma etu ihu igwe dị na ndagwurugwu ụwa? Ndị a bụ ebe ndị mara mma nke ukwuu. Banye iji chọpụta otú ihu igwe ya dị.
Chọrọ ịma ihe kpatara oke ala ọma jijiji na eme na Ecuador? Tinye na anyị ga-agwa gị ihe niile n'ụzọ zuru ezu. Echefula ya.
Mkpa igwe ojii dị na mgbanwe ihu igwe
Nnyocha e mere n’oge na-adịbeghị anya gosiri ọrụ dị mkpa igwe ojii na-arụ na mgbanwe ihu igwe nke metụtara ụwa dum.
Obodo kacha raini na Spain
N’iji eziokwu ahụ bụ na ọnwa Eprel bụ ọnwa nke mmiri na-ezo nke ukwuu, echefula nkọwa nke obodo Spanish kachasị zachasị.
The supervolcanoes nke ụwa
Supervolcanoes dị ike. Ọ bụrụ na ha gbawaa, ha nwere ike izipu ọtụtụ puku kubik kilomita ihe na mbara igwe. Ma gịnị ka ha bụ?
NASA: 2016 ga-abụ ihe kachasị ekpo ọkụ n’akụkọ ihe mere eme
2016 ga-abụ afọ kachasị ekpo ọkụ na akụkọ ntolite, dịka NASA si kwuo, nke juru ya anya mgbe ọ hụrụ ụdị ihu igwe. Banye ịmatakwu.
Ndị Amphibians, ndị nwere nnukwu nsogbu mgbanwe ihu igwe
Mmetụta na-agbawa obi nke mgbanwe ihu igwe na-eme ka ọtụtụ ụdị nke amphibians na-anwụ ngwa ngwa site na Earthwa.
Aesụ na okpomoku zuru ụwa ọnụ
Aesụ bụ otu n'ime ihe dị mkpa ụmụ ahụhụ na-eme pollin. Ma ha nọ n'ihe egwu nke ikpochapụ. Chọpụta ihe kpatara ya.
Na 2016 okpomọkụ ga-abawanye ogo 1 ruo 2 n'ihe gbasara nkezi
Dị ka ụfọdụ ndị ọkachamara gbasara ihu igwe si kwuo, n'oge 2016 a ga-enwe ịrị elu na okpomọkụ nke 1 ruo 2 ogo ma e jiri ya tụnyere nkezi.
Mgbanwe ihu igwe bụ nnukwu nsogbu. Anyị, dịka ụdị, na-emetụta ihu igwe ụwa. Ma olee mgbe anyị na-amalite ime ka ọ ka njọ? Chọpụta.
Choputa ihe mejuputara ikuku nke uwa, okpukpu ya na otu okpomoku uwa nile si emetuta ndu n’elu uwa.
Lezienụ anya nke ọma ma ghara ida nkọwa banyere ọdịiche dị n'etiti mmiri a na-akpọ mmiri iyi na mmiri mmiri.
Gini mere eji tinye Star Pole mgbe nile n’elu igwe?
Anyị na-akọwa ihe kpatara eji etinye Star Star na mbara igwe mgbe ndị ọzọ na-agbagharị gburugburu ụwa. Kedu ka ị ga - esi chọta Polaris?
Anyị na-achọpụta nke bụ ebe 8 n'ime ụwa ebe mmiri na-ezo mmiri n'ime afọ. You maara ha? Gịnị mere o ji zoo ha mmiri?
Mkpochapụ osisi bụ nsogbu dị oke njọ, mana ị maara etu ọ ga-esi nyere aka mee ka okpomoku zuru ụwa ọnụ ka njọ? Anyị ga-agwa gị.
Echefula nkọwa nke mmetụta ọjọọ na Spain nwere ike ịta ahụhụ gbasara mgbanwe ihu igwe n'afọ ndị na-abịanụ.
Ogologo oge ole ka mgbanwe ihu igwe dị ugbu a ga-adịru?
Nwetụla mgbe ị na-eche ogologo oge mgbanwe ihu igwe dị ugbu a ga-adịgide? Otu ìgwè ndị ọkà mmụta sayensị achọpụtawo. Chọpụta. O doro anya na ọ ga-eju gị anya.
Alụlụ na oku
Anyi na akowa ihe igwe na anwuru oku bu na odi iche na etiti ha. Kedu ihe na-ebute igwe ojii ma ọ bụ alụlụ? Chọpụta
Gịnị mere oké osimiri ji dị mkpa?
You nwetụla mgbe ị na-eche ihe mere oké osimiri ji dị mkpa? Anyị na-ahụkarị ya dị ka ebe dị mma ịnụ ụtọ oge ọkọchị, mana kedụ ka o si emetụta ihu igwe?
Mmekọrịta dị n'etiti okpomọkụ na okpomọkụ
Kedu ihe jikọrọ okpomọkụ na ọnọdụ okpomọkụ? O nwere ihe jikọrọ ya na ikuku ikuku? Anyị na-akọwa ọdịiche dị n'etiti echiche abụọ a
Igwe vetikal thermal na ikuku
Ke ofụri ofụri, okpomọkụ mbelata na elu n'ihi na onu nke vetikal kwes grajentị. Kedu ihe mejupụtara ya? Anyị na-akọwara gị ya n'ụzọ zuru ezu.
Gịnị mere elu-igwe ji acha anụnụ anụnụ
Ọ bụrụ na ị jụọla echiche ihe kpatara elu-igwe ji acha anụnụ anụnụ, ebe a ị ga-achọpụta ihe mere o ji nwee agba ahụ ma ọ bụ gbanwee agba ya n'oge ụfọdụ.
Kedu ụbọchị Groundhog?
Abali abuo nke Febrụwarị bu ubochi puru iche. A na-eme ụbọchị Groundhog, ọdịnala nke Celtic nke ga - enyere aka ịmata mgbe mmiri laghachi.
Nyochaa njirimara njirimara nke ikuku atọ kachasị ama ama na Spain: Tramontana, Levante na Poniente. Gịnị kpatara ikuku?
Ọ bụ ezie na ha dịka echiche abụọ sitere na ihu igwe, enwere nnukwu ọdịiche ma a bịa n'ikwu okwu n'etiti ihu igwe na ihu igwe.
Mgbanwe ihu igwe nwere nsonaazụ na-emebi ụwa, ị maara ihe na-ebute na nsonaazụ ọ na-eweta na ụwa anyị na ndị dị ndụ?
Kedu ihe bụ Humboldt ugbu a? Nso idi utịp idaha eyo ye isọn̄? Chọpụta nkọwa niile banyere mmiri iyi ndị a.
Ugbu a oge oyi bidoro ugbu a, rịba ama ụfọdụ ịmata ihe banyere solstice a nke na-enye ezumike ekeresimesi.
Anyị na-agwa gị nke bụ anụmanụ ndị nọ n'ihe egwu ikpochapụ n'ihi okpomoku ụwa. Polar bea, penguins ... ha niile na-alụ ọgụ iji lanarị.
You hụla ebili mmiri ọ bụla na mbara igwe? Igwe ojii ndị a pụrụ iche bụ igwe ojii Kelvin-Helmholtz. Ha chọsiri ike ịmata ihe, nke mere na ha si n’ike mmụọ nsọ dee Van Gogh.
Too Inine ... na oyi na-atụ Alaskan tundra?
N’ụzọ dị ịtụnanya, ha na-achịkwa ịkọ akwụkwọ nri na oyi na-atụ Alaskan tundra, akpan akpan n’ime ime obodo dị n’ebe ọdịda anyanwụ a na-akpọ Betel.
Ebe mmiri kacha ezo na Spain
You nwetụla mgbe ị na-eche nke bụ rainiest ebe ke Spain? Dika odi ka odi ka ogagh adi, Galicia adighi ya. Bata ma chọpụta. O doro anya na ọ ga-eju gị anya.
Otu ajọ ifufe na-efe
Echefula nkọwa nke isiokwu na-esonụ, ebe ọ bụ na n'ime ya m na-akọwa n'ụzọ doro anya otu ajọ ifufe si amalite na ọdịiche dị n'etiti ajọ ifufe.
Ala ọma jijiji na-agbanwe agbanwe agbanwe nke ụwa
Ala ọma jijiji na-agbanwe ihe na-agbanwe agbanwe nke ụwa, dị ka otu nnyocha si kwuo. Ebili mmiri nwere ike ịgbanwe nrụgide nke mmejọ.
Anyị na-agwa gị nke bụ ebe kachasị mma n'ụwa, ebe oke ikuku nwere ike ịdị oke egwu: ọ nwere ike ịgafe 400km / h.
Echefula ihe mmalite nke okpomoku zuru uwa na mgbanwe ihu igwe na ihe nwere ike isi na odinihu nke uwa dum.
10 ịmata banyere ọdịda nke afọ a
A tọhapụrụ equinox mgbụsị akwụkwọ na oge ka mma iji chọpụta 10 na-atọ ụtọ n'ezie banyere oge a hụrụ obere n'anya.
Mgbanwe ihu igwe na El Niño ga-egbu nde mmadụ 10 n'Africa na Central America, ka ndị otu na-abụghị nke gọọmentị na-ahụ maka Oxfam si kwuo.
Otu ìgwè ndị na-eme nchọpụta si Mahadum Liverpool ewepụtala ihe ọmụmụ na-egosi mmegharị nke ahịhịa na mgbanwe ihu igwe.
Germany nwere mmetụta nke mgbanwe ihu igwe
Germany na-enwe mmetụta nke mgbanwe ihu igwe, otu ọkachamara kwuru. Unwu nke na-emetụta obodo a na-ebibi ugbo.
Kedu ihe bụ radieshon nke anyanwụ na otu esi abịaru n'ụlọ anyị, Earthwa? Tinye chọpụta ihe pasent nke radieshon na-etinye obi ha dum na mbara ala.
Lezienụ anya nke ọma ma ghara idafu nkọwa dị iche n'etiti okwu mgbanwe ihu igwe na okpomoku ụwa ebe ha abụghị otu.
Don't maghị ihe mere ugwu ji agbawa ugwu? Banye iji chọpụta mmalite nke otu n'ime ngosipụta kachasị mma ma mara mma nke okike.
Igwe ojii Cirrus bụ ihe na-achọkarị ịmata. Site na ụmụaka anyị na-ahụ ihe odide n'ime ha, yana ndị okenye anyị na-achọ ịnọgide na-eme ya. Banye iji chọpụta ụdị dị.
You chọrọ ịma nke bụ kacha bụrụ obodo na Spain? Tinye chọpụta. Andalusia bụ obodo na-ekpo ọkụ, mana ọ dị ọkụ n’ezie?
You mara na ihu igwe oyi dị egwu karịa ọkụ? Nnyocha e mere n'akwụkwọ akụkọ "The Lancet" eruola nkwubi okwu a. Banye ịmatakwu.
Obodo ndị nwere ike ịla n'iyi n'ihi okpomoku ụwa
Ogologo oke osimiri nke 60 mita nwere ike inwe nsonaazụ dị egwu. Chọpụta nke bụ obodo ndị nwere ike ịla n'iyi.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịmata ndekọ okpomọkụ nke edere na akụkọ ihe mere eme na Spain, egbula nkọwa zuru oke ma andaa ntị nke ọma na data ndị a
Ndị ọkachamara gbasara ihu igwe si na World Bank ewepụtala otu nnyocha gosiri na mgbanwe ihu igwe na-emetụta ụmụ nwanyị dị ime.
Onwere otutu obodo n’uwa n’enwe oge kachasi ike nke uko mmiri na akuko ha ma buso unwu ala ma zere ihe ojoo.
Lezienụ anya nke ọma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ígwé ojii ndị ahụ e kere n’elu ugwu ndị a makwaara dị ka urukpuru nke na-ahazi okwu.
Otu n'ime ebe kachasị mma ma na-adọrọ adọrọ na mbara ala, Antarctica, agaghị ekwe ka ọ nọrọ n'ihe egwu n'ihi okpomoku ụwa.
Ugboro na-ekpo ọkụ bụ ihe ọzọ karịa ọdịiche dị n'etiti ọnọdụ kachasị elu na nke kachasị ala nke ebe edere n'oge ụfọdụ.
Stormhunter akụkọ ihe mere eme na eziokwu. Kedu ihe ị ga - eme iji bụrụ onye na - ebugharị ebili mmiri?
Drones bụ ụgbọ elu na-enweghị ụgbọelu nke na-enwetakwu ọnụnọ. Na meteoroloji, ha nwere ike inye aka mụọ gbasara ihu igwe.
Mgbanwe ihu igwe nke ụwa dum na-enwe na-emetụta ọzara nke ukwuu, na-etinye ndụ ndị bi na ya n'ihe egwu.
N'ime njirimara nke Mars a na-ahụ anya site na ụwa site na teliskop anyị nwere ike igosipụta ikuku nwere igwe ojii na-acha ọcha ọ bụ ezie na ọ bụghị dị ka ụwa, mgbanwe nke oge dị ka nke ụwa, ụbọchị 24, ọgbọ nke ájá ifufe na ịdị adị nke mkpuchi ice na okporo osisi na-eto n'oge oyi. Ọ dị ka ọ maara nke ọma, nri?
Dabere na ndị ọkà mmụta sayensị NASA, na mmiri ozuzo adịghị ka akwa mmiri, kama ọ dị ka hamburger bun.
Ọ bụ naanị obodo isii nke mebererịrị Olimpik na narị afọ gara aga ga-adị jụụ iji kwado ha. Ọbụna maka atụmatụ mgbanwe ihu igwe kachasị, naanị obodo iri na otu n’ime obodo iri na itoolu ndị kwadoro Winter Olympics nwere ike ime ya n’ime iri afọ ndị na-abịanụ dịka nnyocha nke Mahadum Waterloo (Canada) na emenlọ Ọrụ Managemen na Innsbruck (Austria) mere.
Luminescences na ala ọma jijiji bụ ezigbo ihe ịtụnanya, enweghị ụdị ike karịrị ike dịka UFO ma ọ bụ amoosu nke na - akpata ha, yabụ a ga - amụrụ ha
N’ịtụleghachi map ụwa nke mmiri ozuzo ụwa anyị nwere ike ịlele ọtụtụ mmiri ozuzo na-eme na mgbago ugwu. Palmyra Atoll, na oke ala nke 6 degrees n'ebe ugwu, na-anata gburugburu 445 cm nke mmiri ozuzo kwa afọ, ebe ọzọ, nke dị n'otu ohere dị na ndịda nke ekwuru, na-enweta naanị 114 cm.
Ọtụtụ ndị na-eme nchọpụta chere na mmetọ ikuku na-ebute igwe ojii buru ibu, na-adịte aka, na-eme ka ihu igwe dị larịị na-ebute ikuku, ma na-ebute ntụgharị dị n'ime. N'ime ọmụmụ ihe a, ọ chọpụtara na mmetọ, dị ka ihe ịtụnanya, na-eme ka igwe ojii na-adịgide adịgide mana, n'ụzọ dị iche karịa ka anyị siri chee na mbụ, site na mbelata nke akpụrụ akpụ ha na mbelata nke igwe ojii. Ihe dị iche a na - emetụta ụzọ ndị sayensị si anọchite anya igwe ojii na ụdị ihu igwe.
Ebe kachasị oyi na mbara ala dị na ugwu Antarctic na mpaghara ugwu ọwụwa anyanwụ Antarctic ebe okpomọkụ nwere ike iru ụkpụrụ dị n'okpuru 92ºC n'okpuru efu na abalị oyi.
Mbelata nke mmiri ozuzo n'ụdị snow a hụrụ n'afọ ndị na-adịbeghị anya na mpaghara sub-arctic nke Canada emeela ka ụjọ na-atụ ụjọ nke mpaghara ọdọ mmiri ahụ.
Ọ bụghị nanị na ebe ndị ọrụ ihu igwe na-apụta n'ọhịa ọkachamara, kamakwa mejuo agụụ maka ihu igwe nke ndị na-amụrụ ya.
Njupụta nke mgbanwe diurnal na ikuku ikuku dị elu na-adabere n'ọtụtụ ihe, otu nke ịdị adị nke urukpuru na mmetụta nke ikuku pụtara.
Nyochaa njirimara nke isi ikuku atọ kachasị ama na Spain: Siroco, Lebeche na Cierzo.
Federallọ Ọrụ Na-ahụ Maka Mberede Na-ahụ Maka Mberede nke United States enyela ụmụ amaala ya usoro nduzi iji chebe onwe ha na ezinụlọ ha n'oge ihe omume ihu igwe dị oke egwu, nke na-arịwanye elu n'ụzọ dị egwu n'ihi mgbanwe ihu igwe.
E nwere ihe ndị nwere ike itinye aka na-akpata nkwụsị nke ụmụ irighiri mmiri ma ọ bụ kristal ice site na igwe ojii dị ka ikpo ọkụ nke ikuku, ọdịda na ịgwakọta ya na ikuku ikuku.
Variousdị mmegharị dịgasị iche dị iche iche nke nwere ike iduga igwe ojii bụ: ọgba aghara na-arụ ọrụ, ntụgharị, ntụgharị okwu, na nrịgo nwayọ, ogologo.
Dabere na WMO a kọwara Cumulonimbus dị ka igwe ojii dị oke ma sie ike, nke nwere mmepe pụtara ìhè, n'ụdị ugwu ma ọ bụ nnukwu ụlọ elu. A na-ejikọta ya na oké ifufe.
Igwe ojii Cumulus bụ igwe ojii na-emepe emepe na-etolite nke mebere site na mmiri iyi kwụ ọtọ nke ikuku ikuku dị n'elu ụwa masịrị.
Stratus nwere obere ụmụ irighiri mmiri ọ bụ ezie na ọ nwere obere okpomọkụ ha nwere ike ịnwe obere ice.
A kọwara Nimbostratus dị ka isi awọ, mgbe ọ bụla na-acha ọchịchịrị ojii, nwere ihu mkpuchi site na mmiri ozuzo ma ọ bụ snow na-ada karịa ma ọ bụ na-erughị na ya.
A na-ekewa Altocumulus dị ka igwe ojii. A kọwara ụdị igwe ojii a dị ka ụlọ akụ, akwa oyi akwa ma ọ bụ igwe ojii nke nwere ụdị dị iche iche.
Osisi Cirrocumulus nwere akụ, akwa oyi akwa ma ọ bụ mpempe akwụkwọ igwe ojii, na-enweghị onyinyo, nke nwere obere ihe. Ha na-ekpughe ọnụnọ nke enweghị nkwenye na ọkwa ha nọ.
Cirrus bụ ụdị igwe ojii toro ogologo, na-adịkarị n'ụdị ọcha ọcha nke kristal ice.
Mgbe ikuku dị jụụ na-ajụ ma gafee ọnụ ụzọ, alụlụ mmiri na-ekpuchi na oghere nke ikuku dị na ikuku. Ndị ọzọ metụtara usoro na-na na sublimation.
Mgbe anyị na-ezo aka n'ebe dị anya, ịdị elu na ịdị elu nke igwe ojii bụ echiche dị iche iche. Igwe igwe ojii kwụ ọtọ bụ ebe kwụ ya n’etiti ọkwa ya na elu ya.
Albedo bụ mmekọrịta dị n'etiti ọkụ gosipụtara na ike ahụ merenụ n'ogologo ọkụ a na-ahụ anya ma mee ka mbara ala na-enwu:
Hurlọ Ọrụ Ajọ Ifufe Mba nke United States (NHC) ebipụtala mgbanwe na Saffir-Simpson Hurricane scale, nke na-atụle oke ikuku site na ajọ ifufe nke ebe okpomọkụ mgbe ha ruru ụdị oke ifufe.
Isi ntinye nke radieshon na mbara ala bụ radieshon nke Sun na-ewepụta. A na-ebute ike nke radiations ndị a na ụwa n'ụdị ebili mmiri electromagnetic.
Map synoptic bụ ihe osise eserese nke ubi nrụgide nke ikuku. N'ime ya anyị na-anọchi anya ihe ndị dị ka isobars, ebe nrụgide dị elu na nke dị ala na sistemụ ihu.
Ihe mbara ala mbara ala bụ akụkụ ala nke ikuku ebe ikuku ikuku dị egwu na-achịkwa.
A na-ekewa ikuku dịka mgbanwe, dịka nrụgide, ọnọdụ okpomọkụ ma ọ bụ njupụta, n'etiti ndị ọzọ, na sara mbara anyị na-amata ọdịiche dị n'etiti Homosphere na Heterosphere
Ntuziaka NAO na-atụ iche esemokwu dị iche n'etiti Iceland na Lisbon ma ọ bụ Gibraltar. Usoro dị mma ma na-adịghị mma nwere ike ịdabere na nrụgide dị iche.
Ifufe katabatic bụ ụdị ikuku na-efegharị ugwu, ala na-ajụ oyi n'abalị ma ikuku na-emetụta akụkụ ahụ na-agbadata site na ike ndọda.
The meteorologist: ọkachamara sayensị
Ndị mmadụ nwere mmasị na ihu igwe, ihu igwe na ihu igwe, ndị na-amụ gbasara ihu igwe na AEMET, ọmụmụ banyere ikuku ụwa.
Otu n’ime okwu ndị e ji eme ihe banyere ihu igwe na akụkọ banyere ihu igwe bụ nke iru mmiri metụtara. Ọ bụ ezie na ọ ...
Gini bu meteorology?
Meteorology bụ nkuzi sayensị na nka ọrụ aka maka ịmụ na ịkọ ọdịiche dị iche iche na-eme ...